Ma laguu heyn lahaa taleefonkaaga haddii aad ku heleyso cunto bilaash ah? | Baahin Media
In qoysaska marka ay cunnooyinka u raadsadaan hoteelada ay iska dhigaan taleefoonada iyo Kombyuutarka gacanta ee loo yaqaano Tablets-ka, ayna wada sheekeystaan way adagtahay, balse makhaaxi ayaa dooneysa in arrintaasi ay wax ka bedesho.
Hotelka Frankie & Benny’s ayaa ballan qaaday in raashiin bilaash ah ay siin doono caruurta waalidiintooda marka ay hotelka yimaadaan aanan ku mashquulin taleefoonka gacanta iyo tablets-ka, balse wakhti la qaata awlaadooda.
Hotelkan ayaa sidoo kale sheegay in arrintan ay ka dambeesay, kadib markii daraasad ay sameeyeen ay muujisay in caruurta ay doonayaan in waalidkooda aysan wakhti badan ku bixinin isticmaalka taleefoonada iyo waxyaabaha lamidka ah, balse ay wakhti la qaataan iyaga.
Boqolkiiba toban caruurtaasi daraasadda laga sameeyay aya sheegay in xiliyada qaar ay taleefoonada ka xaseeyaan ama ka qariyaan waalidiintooda, si wakhti ay ula qaataan, halka boqolkiiba labaatan na ay sheegeen in waalidiintooda ay go’aan ku gaareen inay isku mashquuliyaan taleefoonadooda, halkii ay la sheekeysan lahaayeen.
Image captionFrankie & Benny
Shan iyo labaatan boqolkiiba waalidiinta lagu wareystay warbixinta ayaa qiray inay eegaan taleefoonadooda xiliyada ay la cunteynayaan qoyskooda, halka saddex iyo labaatan na ay iska dhaga tiraan caruurtooda marka ay la hadlayaan.
Daraasadda ayaa waxaa lagu wareystay waalidiin gaaraya kun iyo shan boqol iyo caruur lamid ah tiradaasi. Hoteelka ayaa sheegay in cidnana aanan lagu qasbi doonin waxa aysan dooneyn, balse ay tahay mid dadka lagu dhiiragelinayo.
Hotelka Frankie & Benny’s oo leh 250 laamood ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid tijaabo ah, balse ay sii ballaarin doonaan haddii ay noqoto mid waxtar leh. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay tallaabadan, halka kuwa kale na ay shaki ka muujiyeen.